शिर्षक: मेरो जिवनको कथा
हरेक नारी र पुरुषले पढ्नै पर्ने सत्य कथा ! सक्दो फेसबुक वाल र धेरै ग्रुपमा सेयर गर्नु होला
म अनि म जस्ता धेरै पुरुष आज सम्म यस्ता सभ्य बलात्कारी भएका छन् । बलात्कारीलाई थाहा होला नहोला तर पेट्काका मांसपेशी दुखीरहन्छन तर पनि नारी मुस्काइरहेकि हुन्छिन, पीडा झुठो हुँदैन । श्रीमानले माया गर्छ भन्दैमा, श्रीमानलाई नाई भन्न नहुने यो कस्तो चलन हो?
यो एउटा कथा हो जुन वास्तविक छ । कसैको हैन धेरैको जीवनसंग मेल खाने छ, यो संयोग हैन किनभने मैले जे लेखे धेरैले भोगिरहेका छन् । यो एउटा महिलाको कथा हो, वेदनाको कविता हो!
उनी एउटी सहनसिल पात्र हुन, हृदयले सुस्त श्रवण छन्, पुरुषले नारिको भावना कहिल्यै सुन्दैनन ।
उनिहरुका आवाज भित्रभित्रै गुम्सिएका छन्,
श्रीमान बाहेक अरुलाई सुनाउन पनि सक्दैनन हैन र ?
आज म मेरो कथालाई एउटा बेनाम अभिब्यक्ति दिइरहेको छु, आज म भन्दैछु एउटा सभ्य बलात्कारीको कथा, जसले एउटा नारिलाई बलात्कार गरेको छ, निमोठेको छ अनि थिचेको छ ।
म को हुँ त्यसतर्फ नखोज्नु होला है ? म तपाइकै श्रीमति जस्तै, आमाजस्तै, दाजुभाइ जस्तै, दिदीबहिनी जस्तै अनि साथी जस्तै एकजना, कथावाचक पात्र हुँ या सुत्रधार जे भन्ने मन छ भन्नुहोस!🙏
कथा सुरु हुन्छ मेरो विवाहको पहिलो रातबाट.........
उ छिटै सुत्यो.. थाकेर होला,
म भने सुत्न सकिन किनभने सुहागरात केवल चलचित्र या कथामा मात्र रमाइलो थियो, उसको पुरुषत्व र आवेगले मेरो पेटका मांशपेसी दुखेको थियो ।
म सुत्न सकिन, उसको सन्तुष्ट घुराइमा म आफूलाई खोजिरहेकी थिए, तर शायद पाइन मैले आफूलाई उ भित्र।
उसले मलाई सोधेन, मेरो थकाइ बारे कुनै प्रश्न नै गरेन । हरेक बिहान ओच्छ्यानमै उसलाई चिया चाहिएको थियो र हरेक साँझ ओच्छ्यानमै मेरो शरीरको डस्ना । उसले मलाई माया गर्छु भन्यो, मैले पत्याइरहे ।
मलाई मेरो माइतले पनि त त्यही सिकाएको हो, पतिलाई माया गर्नु, सेवा गर्नु, मैले गरिरहें ।
उसलाई उसका घरकाले पत्नीको माया गर्न सिकाउन भ्याएन छन्, उ सभ्य बलात्कारी बनेर मलाई बलात्कार गरिरह्यो ।
शुक्रबारको साँझ थियो र मेरा पति साँच्चै रातीसम्म अबेर कार्य गरिरहेका थिए, उनि ति दिनमा वास्तवमैं व्यस्त थिए । मलाई नराम्रो लाग्छ किनभने उनले हप्तामा केवल एकदिन मात्र बिदा पाउँछन् तर खुशी लाग्छ किनभने उनी भन्छन् कि तिमिलाई माया गर्छु!
म केवल गृहणीमात्र हैन, म त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गृहणी पनि हुँ । उनि कमाउने कार्य गर्दछन् र म ब्यबस्थापन गर्ने गर्दछु, पैसाले मात्र खाना पाक्दैन नि, म त्यो रसायन स्त्री हुँ जसलाई जीवनका रसायन र घरको भौतिक बिज्ञान पनि थाहा छ ।
अफिसबाट सोझै घर आएका उनी लुगासम्म फेर्न भ्याएका थिएनन्, उनि काम सकाएर कोठामा आए । सुस्तरि कपडा खोले, मैले उठेर उनलाई कपडा खोल्न सर्टका बटन खोलेर सहयोग गरे । उनले मेरो कम्मरमा समाते र आफ्नो शरीरतर्फ ताने, मैले नाई भने । मेरो पेटमा पीडा थियो, माफ गरिदेउ, नछुने भनेको केवल अस्तिको सोमबार मात्र हो । उसले मलाई छाड्यो यसरी मानौ आँप खाएर कोया फाले झै फाल्यो!
उनले भने, हस ठिकै छ म बाहिरै केही ब्यबस्था गर्छु… लुगा बाँडेजस्तो म श्रीमान बाँड्न कहाँ सक्छु र ?
मैले सहिरहें उनको बाहिरी ब्यबस्थापनको कुराले मेरो पीडालाई मैले माफ गरे, उनि चढिरहे म रोइ रहे, आझाबाट आसुका ढिक्का झारिरहेँ!
मलाई ओच्छ्यानमा फालेर उनि हामफाले, यस्तो लाग्यो कि माया गर्नु उनकालागि बिकल्प हैन बाध्यता हो । उ भन्छ, तिमिलाई मलाई माया गर्छु!
शायद यो मायाले नै होला मेरो शरीरको अवस्थाको उनलाई वास्ता छैन । मलाई मेरो श्रीमानको यो कुरा मन पर्दैन, बिवाह देखि ओच्छ्यानसम्म उनले सँधै मेरो भावनाको कदर गरेका छैनन् ।
म अनि मजस्ता धेरै आजसम्म पनि यस्ता सभ्य बलात्कारको शिकार भएका छन् । बलात्कारीलाई थाहा होला नहोला तर हाम्रा पेटका मांशपेसीहरु दुख्दछ, कम्मरमुनीको त्यो दुखाई बिच हामी मुस्काइरहेका हुन्छौ तर पीडा झुठो हुँदैन । श्रीमानले माया गर्दछ भन्दैमा श्रीमानलाई नाई भन्न नहुने यो कस्तो चलन हो । मलाई मिलेर बस्नु छ, मेरा श्रीमान राक्षस पनि त हैनन् ।
उनि साँच्चै मलाई माया गर्छन, अब मैले नाई भन्न थालेकि छु । बाहिरी ब्यबस्थापनको धम्कीलाई जस्ताको तस्तै जवाफ पनि दिन्छु । दुइ अक्षर पढेकी छु, उनको जत्तिकै कमाई म नि गर्न सक्छु हैन र ? सम्बन्ध बिच्छेद मेरो ओखती हैन्, दुबैबिचमा हुने समझदारीको मेरो ओखती हो ।
नारी र पुरुष बिना यो समाज चल्दैन्, आजभोली मैले बोल्न थालेपछि श्रीमान बुझ्न थाल्नु भएको छ । दुवैलाई इच्छा लाग्दा गरिएको मायाले पुरुषत्व र नारीत्वलाई पूर्नब्याख्या गरेको छ । मेरा सभ्य बलात्कारी अब त्यस्ता छैनन, मेरो मौनताले उनलाई बलात्कारी बनाएको रहेछ ।
कहिलेकाँही उनि अधिकार जमाउन खोज्दा मैले चुप लगाउन जानेकी छु ।
किन कि? म पनि त उनै श्रीमानकी पत्नी हु!
कथा कस्तो लाग्यो ?
प्रतिक्रिया दिन नछुटाउनु होला!
यस्तै अन्य: मर्म स्पर्शी कथा, गजल, मुक्तक आदि लेख लिएर सधै आउने छु ! मेरो पेज #Like गर्नु होला, सधै म तपाईं संगै हुनेछु! धन्यवाद ।।
लेखक: राज अवस्थी
महेन्द्रनगर, कंचनपुर, हाल काठमाडौँ